Guddoomiyaha Barlamaanka Somaaliya dalka ka dhoofay si uu uga qayb galo. – Kismaayo24 News Agency
Guddoomiyaha Barlamaanka Somaaliya dalka ka dhoofay si uu uga qayb galo.
by admin 26th January 2020 089
Wafdi uu Hogaaminaayo Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamanaka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxaa ay xalay ka dhoofeen Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle ee Magaalada Muqdisho,iyaga oo kusoo jeeda dalka Burkiino Faso.
Wafdi oo ay garoonka kasii sagootiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa waxaa ay Magaalada Ouagadougou ee ee Caasimadda Burkina Faso uga qeyb-geli doonaan Shirka sanadlaha ah ee Midowga Baarlamaanada Dowladaha xubnaha ka ah OIC (PUIC).
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamanaka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa inta uu dalkaasi ku sugan yahay waxaa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaan qaar kamid ah Madaxda ka qeyb-galeysa doonaan Shirka sanadlaha ah ee Midowga Baarlamaanada Dowladaha xubnaha ka ah OIC (PUIC).
Madaxweyne Xaaf oo magacaabay Taliyaha Amniga Gobolka Mudug
Top News: Madaxweyne Gaas-ka Puntland oo ku dhegen Ururka Middowga Africa.
Warar dheeraad ah oo laga helaayo dab qasaaro geestay oo xalay ka kacay suuqa bakaaraha
Tifaftiraha K24 8th August 2017
Sakariye Sakariye 10th May 2019 25th March 2020